Ka saar asalka sawirka internetka: barnaamijyada si loo fududeeyo | Hal -abuureyaasha Online
Ka saar asalka sawirka internetka
Encarni Arcoya | 28/07/2021 23:38 | La cusbooneysiiyay 28/07/2021 23:41 | Tricks
Waxaa jira kuwo badan oo, ka dib sawir qaadista, raadinaya sida asalka looga saaro sawir onlayn ahAma maxaa yeelay wax baa soo baxay oo aysan jeclayn, maxaa yeelay waxay u baahan yihiin inay tirtiraan qaybo gaar ah, ama inay rabaan inay ka helaan waxyaabahaas sawirka meel kale.
Si kasta oo ay tahay dacwadaadu, waa inaad ogaataa inay jiraan siyaabo badan oo loo sameeyo, iyo inay aad u fudud tahay in la gaadho. Laakiin waa inaad tixgelisaa xoogaa tixgelin ah ka hor intaadan fulin. Marka, halkan waxaan ku siin doonaa xoogaa qalab dalwad ah si aad uga takhalusto asalka sawirka si fudud (oo bilaash ah). Ma u soconnaa?
1 Maxaad asalka uga saraysaa sawir
2 Shabakadaha internetka si looga saaro asalka sawirka
2.3 Sixirkii oo siibay
2.6 Ka saar.org
2.7 Taariikhda Eraser
Maxaad asalka uga saraysaa sawir
Ka soo qaad inaad hadda samaysay sawir aad u qurux badan. Tanina, sida loo habeeyay, waxaa loo adeegsan karaa in lagu helo aagga aad samaysay, laakiin sidoo kale meelaha kale, sida waddamada kale, taallooyinka, iwm. Waxyaalaha dhibsada, khadadka gadaasha sawirka, ama xitaa dadka sameeya tilmaamaha aadan jeclayn (ama aan ku rinjiyeyn sawirka). Waxaas oo dhan waa laga saari karaa, in kasta oo ay ku xirnaan doonto haddii aad rabto inaad ka saarto asalka ama hal shay oo kaliya.
Dhab ahaantii, waxaa jiri kara sababo badan oo meesha looga saari karo asalka sawirka, in kasta oo ay adkayd in hore loo gaaro, haddana hadda ma aha Kuwa badan baa jira aaladaha la isticmaali karo iyadoon lahayn fikrad tafatirka sawirka taasna, ilbidhiqsiyo gudahood, waxay soo celisaa sawirka iyada oo aan lahayn asalka. Miyaan ka hadalnaa iyaga?
Shabakadaha internetka si looga saaro asalka sawirka
Haddii aad leedahay sawirka, waxaa la joogaa waqtigii aan bilaabi lahayn inaan la shaqayno websaydhyada qaarkood oo kaa caawin doona inaad hesho sawirkaas oo aan lahayn asalka. Ahaanshaha bogagga shabakadda, waxaad ka shaqayn kartaa sawirka labadaba PC -gaaga iyo moobilkaaga. Taasi waa, uma baahnid inaad haysato kombiyuutar aad ku samayso, laakiin si toos ah taleefankaaga ayaad uga shaqayn kartaa.
Waxaan ku bilownaa degel caan ah oo, sida ay khubaradu sheegeen, mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee aad isticmaali karto. Markaad haysato sawirka la soo dhejiyay, waxaad u baahan doontaa oo keliya inaad isticmaasho buraashka si aad ugu sheegto waxyaalaha aad rabto inaad tirtirto waana intaas. Sida ugu fudud.
Hadda, inaad ku shaqeyso aaladda, gaar ahaan haddii ay tahay inaad tirtir qaybo aad ugu dhow walxaha ama dadka inaad rabto inaad baxdo, waxaa fiican inaad u isticmaasho kombiyuutarka si aad awood ugu yeelatid inaad ku dhajiso sawirka oo aadan gooyn waxa sii ahaan doona.
Qalabkani runtii waa heer aad u horumarsan xagga tafatirka sawirka, wuxuuna la mid yahay Photoshop, laakiin waa bilaash. Dad badan, Pixlr waa bogga ugu wanaagsan ee tooska ah ee tafatirka sawirrada. Laakiin waxay leedahay dhibaato waana inaad u baahan tahay aqoon ugu yar si aad si fiican ula shaqayso (haddii kale waad lumin doontaa).
Sida uu u sameeyo, runtu waa taas hawlgalkiisu waa isku mid sida Photoshop, sidaa darteed haddii aad taqaanid sida loo sameeyo barnaamijka, si fudud ayaad ugu dhex samayn kartaa.
Dabcan, markaad u baahan tahay inaad si qoto dheer u shaqeyso, waxaa fiican inaad ku sameyso kombiyuutar.
Sixirkii oo siibay
Qalabkani wuxuu leeyahay sirdoon macmal ah, taas oo ah, marka aad sawir geliso, waxay si otomaatig ah iskugu dayi doontaa inay tirtirto asalka sawirka keligiis, taas oo ah, ilbidhiqsiyo gudahood, waxaad yeelan doontaa sawirkii asalka ahaa iyo natiijada leh hufnaan hufan. Maxaan fiicnayn? Ha welwelin, waxay ku siinaysaa taxane ah qalab si loo yareeyo gooynta, si loo sifeeyo oo loo helo si kaamil ah marka laga saarayo asalka sawirka internetka.
Laakiin waxay leedahay dhibaato, taasina waa in natiijooyinka lagu siin doono summad -biyood, oo haddii aadan rabin inay soo muuqato markaa waa inaad lacag ka bixisaa qorshe.
Ma rabtid inaad lacag bixiso oo waxaad rabtaa aalad 100% bilaash ah? Hagaag, tani waa mid ka mid ah xulashooyinka, oo waliba u shaqeeya si aad ugu eg kii hore, oo leh natiijooyin la mid ah.
Waxaad u baahan doontaa oo kaliya inaad geliso sawirka bogga, bidixda, iyo aaladda ay ku siiso, waa inaad raadso dulucda wax walba oo aad rabto inaad joogto. Markaad samayso, waxaad ku siin doontaa badhan cagaaran oo aad ku calaamadeyn doonto aagga aad rabto inaad dhigato iyo badhanka cas si aad u tirtirto waxa aadan rabin. Kaliya waa inaad garaacdaa Beddel si aad u hesho natiijada.
Xaaladdan oo kale, aaladdan khadka tooska ah ayaa ah tan ugu fiican, gaar ahaan maadaama aad leedahay casharro kugu hagaya tallaabo tallaabo. Waxaa loo adeegsan karaa Windows, Mac iyo IOS waana inaad adigu iska leedahay geliyaan sawirka oo iska daa shaqada, maxaa yeelay natiijadu waxay noqon doontaa mid toos ah (markaa waad ka shaqayn kartaa si aad u dhammaystirto).
Khasaaraha kaliya ayaa ah, haddii aad rabto sawirka tayada sare leh, waa inaad bixisaa, laakiin tayada inteeda kale ayaa kuu oggolaaneysa inaad lacag la’aan ku soo dejiso.
Aynu raacno aalad kale si aan meesha uga saarno asalka sawirka si fudud. Si aad tan u samayso, waa inaad dhig asalka oo, ilbidhiqsiyo gudahood, sawirku wuxuu soo muuqan doonaa asaga oo aan lahayn wax asal ah.
Kahor intaan aaladdu ku koobnayn wajiyo kaliya, laakiin hadda waxay kuu oggolaaneysaa inaad u adeegsato xayawaanka, walxaha, dadka, iwm. iyadoon waxba burburin. iyo waxa ugu fiican ayaa ah in natiijada ay aad u wanaagsan tahay.
Codsigan, loogu talagalay Android oo keliya, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si fudud uga saarto asalka. Kaliya waa inaad gujisaa waxaad rabto inaad tirtirto oo arjigu wuxuu daryeeli doonaa ka shaqeynta aagga si ay ugu fiicnaato. A) Haa waxaad heli doontaa sawir leh asal hufan si aad ugu adeegsato wax kasta oo aad rabto.
Markaad hesho natiijada, waxay kuu oggolaaneysaa inaad qeexdo natiijada, laakiin sidoo kale inaad gacanta ku sameyso ka saarista.
Xaaladdan waxaan kaaga digayaa inaysan ahayn barnaamij bilaash ah, laakiin ay ku kacayso 2 euro. Laakiin waxaa laga yaabaa inay u qalanto maxaa yeelay waa mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee laga saari karo asalka muuqaalka internetka, kiiskan iyada oo loo marayo moobaylkaaga.
Waxaa laga heli karaa Android iyo IOS labadaba waxayna awood u leedahay inay tirtirto asalka asalka istaroogga, laakiin sidoo kale shay kasta oo si xun u saameeya sawirkaaga. Xataa waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku darto asalka aad ku leedahay sawirkaaga sawirka si ay u qabtaan shaqada tafatirka buuxa.
Waxaa jira qalab badan oo onlayn ah si meesha looga saaro asalka sawirka. Miyaad nagu talin lahayd mar dambe oo aad taqaan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Ka saar asalka sawirka internetka
9-ka bog ee ugufiican si aad sawirro khadka tooska ah ugaga beddelaan